Allgedo.com » Madaxweynaha oo Magacaabay Guddiga Madaxa-bannaan ee Taakuleynta Ciidamada
Madaxweynaha oo Magacaabay Guddiga Madaxa-bannaan ee Taakuleynta Ciidamada
Print here| By: allgedo.com: Sunday, July 9, 2017 // u Jawaab
Muqdisho, 9 Luulyo 2017: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay guddi maamula sanduuqa taakulaynta ciidamada.
Sanduuqaan oo ah mid madaxbannaan ayaa waxa uu Madaxwaynuhu u magacaabay Guddoomiye Mudane Janaraal Jaamac Maxamed Qaalib, waxaana Guddoomiye K/Xigeen loo magacaabay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan.
Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay munaasabadda daahfurka sanduuqa taakulaynta ciidamada ayaa yiri “Maanta waa maalin baal dahab ah ka galaysa taariikhda ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa wada jirka Shacabka Soomaaliyeed iyo Ciidanka, wada jirka Dowladda iyo Shacabka,”
Madaxwaynaha ayaa ummadda Soomaaliyeed u diray baaq ku aaddan taakulaynta iyo taageerada Ciidamada qaranka si ay dib ugu soo laabato sharafta muwaadinka Soomaaliyeed.
“Difaaca dalka ma ahan masuuliyad u gaar ah Ciidamada oo kaliya. Waa masuuliyadda u taala qof kasta oo Soomaali ah, haddii aad doonaysaan in aad ku noolaataan dal sharaf leh.”
Madaxwayne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xusay geesiyaasha Ciidamada qaranka ee dadaalka dheer u galay sidii ay uga xorayn lahaayeen Al Shabaab dalka oo idil, isaga oo faray shacabka Soomaaliyeed in ay gacan ku siiyaan ciidamada sidii loo cirib tiri lahaa kooxdan.